Nolal ma jirtaa dhimashada kadib?
Su’aal: Nolal ma jirtaa dhimashada kadib?
Jawaab: Nolal ma jirtaa dhimashada kadib? Baaybalka wuxuu noo sheegay, “Ninka ku dhashay dumarka waa dhoor maalin iyo dhibaato badan. Isaga wuxuu u socdaa sida ubax iyo waxay u buubtay; sida hoos buubaya, uma adkeysanayo....Haddii aadanaha uu dhinto, mar labaad ma noolanayaa” (Ayuub 14:1-2, 14)?
Sida Ayuub, ku dhawaadkii inaga dhammaanteen waxaa caqabad nagu noqotay su’aashaan. Dhabtii maxaa nagu dhaco markaan dhimano kadib? Si fudud ma oga baxnaa? Nolosha ma albaab wareeganayaa oo ka tagaya iyo ku soo laabanaya dhulka si aan markaas u gaarno weynaanta shaqsiga? Qof walba ma aadaa meel isku mid ah, ama waxaan aadnaa meelo kala duwan? Dhabtii ma jirtaa jano iyo naar, ama waa xaalada maskaxda?
Baaybalka wuxuu noo sheegay in aysan jirin kaliya nolol dhimashada kadib, laakin nolol daa’in oo aad u qiima badan ee “Aan il weli arkin, dhag aan weli maqlin, iyo maskax aysan weli qiyaasin waxa uu Ilaahey u diyaariyay kuwa isaga jacel” (1 Korintos 2:9). Ciise Masiixi, Ilaahey wuxuu ku jiraa dhiiga, wuxuu u yimid dhulka in uu nasiiyo naxariistaan nolosha daa’inka. “Laakin wuxuu ka xanaaqay caasinimadeena, waxaa loo buburiyay xumaatooyinkeena; ciqaabta noo keentay nabada waxay noqotay xagiisa, iyo dhaawaciisa waan ku bogsoonay” (Ishacyaah 53:5).
Ciise wuxuu qaatay ciqaaabta qof walboo inaga ah u qalmay iyo u huray Noloshiisa hore. Sedex maalmood kadib, wuxuu u xaqiijiyay Nafsadiisa guul ah dhimashada isagoo ka soo kacayo qabriga, Ruuxa iyo dhiigba. Wuxuu joogay dhulka afartan maalmood iyo waxaa marqaati ka ahaa kumanaan ka hor intuusan aadin gurigiisa daa’inka ah ee janada. Rooma 4:25 wuxuu yiri, “waxaa loo keenay in uu u dhinto dambiyadeena iyo nolal ayaa lagu soo celiyay oo xaqiijinteena ah.”
Soo noolaanshaha Ciise Masiixi waxay aheyd dacdo si wanaagsan loo qoray. Rasuulka Paul wuxuu ka horyimid dadka in uu weydiiyo marqaatiga saxnaanta, iyo ma jiro qof u suurta galeyso in uu runta ogolaado. Sarakicida waa geeska rumeynta Masiixiga; sababtoo ah Ciise wuxuu ka soo kacay dhimashada, waxaan heli karnaa aaminaada ah in inaga, si doo kale, aan soo noolaaneyno.
Paul wuxuu ka digay qaar kamdi ah Masiixiyiintii hore oo aan aaminin middaan: “Laakin haddii loo sheegay in Ciise ka soo kacay dhimashada, sidee ayay qaar idinka mid ah u dhihi karaan ma jiraan wax ka soo noolaanshaha dhimashada ah? Haddii aysan jirin dhimasho ka soo noolaansho, kadib ma jirto in xitaa Ciise in la qaaday” (1 Korintos 15:12-13).
Ciise wuxuu ahaa kaliya midkii ugu horeeyay goosashada weyn ee kuwa ku soo laabanayo nolasha markale. Dhimashada jirka ah waxay ku imaataa dhinaca hal nin, Adam, kaas oo inagoo dhan aan ka soo jeedno. Laakin dhammaan kuwa ansixiyay qoyska Ilaahey dhinaca Ciise Masiixi waxaa la siinayaa nolol cusub (1 Korintos 15:20-22). Sida uu Ilaahey uu Ciise u qaaday’ jirka, marka jirkeena ma soo noolaanayaa xiliga soo noqoshada Ciise (1 Korintos 6:14).
Inkastoo ugu dambeyntii aan soo noolaaneyno, qof walba mawada galayo janada. Dooqa waa in uu sameeyaa qof walba ee nolashaan joogo si loo go’aansado meesha isaga ama iyada ay u aadayaan daa’inka. Baaybalka wuxuu yiri in inaga naloo magacaabay in aan dhimano kaliya hal jeer, iyo kadib taas waxay noqoneysaa xukun (Cibraaniyada 9:27). Kuwa loo sameeyay wanaaga waxay galayaan nolal daa’in ah ee janada, laakin kuwa aan aaminsaneyn waxaa loo diyaariyaa ciqaab daa’in ah, ama naar (Matayos 25:46).
Naarta, sida janada, ma ahan kaliya xaalad jiritaan ah, laakin qoraal, iyo aad dhab u ah, goobta. Waa goobta kuwa aan wanaaga sameynin ay la kulmayaan ciqaab daa’in ah, aan dhammaanin ee Ilaahey ka timd. Waxay ku adkeysanayaan ciqaabta dareenka, maskaxda, iyo jirka, dhibaato dareen leh oo ceeb ah, shalaay, iyo xaqiraad.
Naarta waxaa lagu sharaxay sida god aan dhammaad laheyn (Luukas 8:31, Muujintii 9:1), iyo bali dab ah, ee ku horaya baaruud, meeshaas oo dadka degan lagu ciqaabayo habeen iyo maalin weligood iyo daa’in (Muujintii 20:10). Naarta, waxaa jiraya baroor iyo ilka jiriqsiga ilkaha, oo tilmaamaya walbahaar daran iyo xanaaq (Matayos 13:42). Waa meesha garyoonka weligiis dhimaneynin iyo dabka uu san dameynin (Markos 9:48). Ilaahey ma ku farxo dhimashada kuwa xun, laakin wuxuu damcaa in ay kasoo laabtaan wadooyinka xumaantooda si markaas ay u noolaadaan (Yexesqaal 33:11). Laakin managu qasbayo in aan u hogaansanaano; haddii aan doorano in aan diidno Isaga, Wuxuu leeyahay dooq yar laakin nasiiyay waxa aan rabno—in aan ku noolaano markii Isaga laga reebo.
Nolosha aduunka waa imtixaan, diyaar garowga waxaa imaanayo. Kuwa aaminsan, tani waa nolol daa’in ee joogida degdega ee Ilaahey. Marka sidee ayaan wanaag u sameynaa iyo noogu suurtagaleysaa in aan helno nolal daa’in ah? Waxaa jira kaliya hal wado—oo dhinaca rumeysiga ah iyo aaminaada Wiilka Ilaahey, Ciise Masiixi. Ciise wuxuu yiri, “Waxaan ahay soo noolaanshaha iyo nolosha. Kuwa aniga i aaminsan way noolaanayaan, xitaa inkastoo isaga uu dhintay; iyo qof walba oo nool iyo i aaminsan aniga weligii ma dhimanayo...” (Yooxanaa 11:25-26).
Naxariista bilaashka ah ee nolasha daa’inka ah waxaa loo heli karaa dhammaan, laakin waxay u baahantahay in aan u diidno nafsadeena qaar kamid ah raaxada aduunka iyo uhurida nafsadeena Ilaahey. “Qof walba oo aaminsan Wiilka wuxuu leeyahay nolol daa’in ah, laakin qof walboo oo diido Wiilka ma arkayo nolol, Ilaahey inkaartiisa ayaa ku hareysa” (Yooxanaa 3:36). Nalama siinayo fursad looga tawba keeno dambiyadeena dhimashada kadib sababtoo ah marka aan aragno wejiga Ilaahey, malahaaneyno wax dooq ah laakin in aan aamino Isaga aan ka aheyn. Wuxuu rabaa Isaga in aan inaga ugu imaano rumeysi iyo jacel hadeer. Haddii aan dhimashada ogolaano ama Ciise sida bixinta gardarada dambiyadeena badan ee Ilaahey ka soo horjeeda, waxaan hubnaa ma ahan kaliya nolol micna ku leh dhulka, laakin sidoo kale nolol daa’in ah ee joogista Ciise.
Haddii aad rabtid in aad ogolaatid Ciise Masiixiga sida Badbaadiyahaaga, halkaan waa tusaale tukusho. Xasuuso, adigoo dhahayo docodaan ama doco walba oo kale kuma badbaadineyso. Kaliya waa aaminaada Masiixiga ee kaa badbaadin kara dambiga. Docodaan waxay si fudud uga fogtahay wadada loogu muujinayo Ilaahey rumeyntaada Isaga iyo u mahadceli Isaga oo badbaadintaada ah. “Ilaahayow, waan ogahay in aan dambi kaa galay iyo waxaan istaahilaa ciqaab. Laakin Ciise Masiixi ayaa dambiga aan istaahilay qaatay si markaas dhinaca rumeyntiisa iyadoon ku jirto layga cafin karo. Aaminaadeyda Isaga ayaan saaray ee badbaado ah. Waad ku mahadsantahay naxariistaada cajiibka ah iyo cafiskaaga—naxariista nolosha daa’inka! Aamiin!"